२४ जना संक्रमित देखिएको प्रदेश १ को सुरक्षा व्यवस्था कडा « Kakharaa
२४ जना संक्रमित देखिएको प्रदेश १ को सुरक्षा व्यवस्था कडा
१० बैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का संक्रमितहरुको संख्या एकाएक प्रदेश एकको उदयपुर जिल्लामा बढ्दै गएको छ। गत शुक्रबार र मंगलबार उक्त जिल्लाबाट २४ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
गत शुक्रबार ११ जना संक्रमितलाई उदयपुर ३ स्थित भुल्केको एक मस्जिदमा फेला पारेपछि सशंकित बनेको सरकारले सो क्षेत्रलाई नै कडा सुरक्षाबीच राखेको छ। कोभिड १९ का कुल ४२ जना संक्रमित फेला परेसँगै हाल ४ जना बिरामी उपचारपछि घर फर्किएको अवस्थामा ३८ संक्रमित उपचारका लागि अस्पताल भर्नामा छन् । समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै मंगलबारदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गरेको छ ।
विदेशबाट आएकाहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए पहिलो चरण मानिन्छ भने उनीहरुले परिवार र छरछिमेकमा संक्रमण फैल्याए दोस्रो चरण मानिन्छ। धनगढीका एक युवकले आफ्नो परिवारको सदस्यमा संक्रमण फैलाएपछि नेपालमा कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो । संक्रमितहरुले समुदायमा संक्रमण फैल्याए भने यसलाई तेस्रो चरणको अवस्था मानिन्छ ।
मंगलबार पोजेटिभ नतिजा आएकाहरु १८ वर्ष उमेरदेखि ५८ वर्षसम्मका छन्। दुईजना महिलासमेत छन् । एक साताभित्र एकै क्षेत्रबाट कोभिड १९ का ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि प्रदेश एक सरकारले सो क्षेत्रमा सुरक्षा अवस्था कडा बनाएको जनाएको छ ।
सुरक्षा अवस्थामा कडाइ गरेसँगै आवतजावतमा समेत रोक लगाएको र प्रदेश एकलाई उच्च सतर्कतामा राखेको प्रदेश एक सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन् । मन्त्री घिमिरेले अहिले उदयपुरबाट संक्रमितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उदयपुर जिल्लाको नाकामा सुरक्षाकर्मी राखिएको र अत्यावश्यकबाहेक हिँड्डुलमा समेत रोक लगाएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मंगलबार धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा ८ जना र काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा तीन जनाको नतिजा पोजेटिभ आएको हो । पोजेटिभ नतिजा आएका ८ जनाको सोमबार राति नै थ्रोट स्वाब पुनः परीक्षणका लागि विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालबाट नमूना धरान पठाइएको थियो । यसक्रममा कोशी अस्पताल पनि उनीहरुको नतिजालाई लिएर ढुक्क हुने प्रयासमा थियो । सोही शंकास्पदको नतिजा पोजेटिभ आएको अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले बताइन् । डा. मिश्राका अनुसार पोजेटिभ नतिजा आएका सबै ८ जनालाई राति नै विराटनगर ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी अन्यलाई पनि ल्याउने क्रम रहेको छ । डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘शुक्रबारदेखि राखिएका पोजेटिभ ब्यक्तिहरुमा अहिलेसम्म कोरोनाको लक्षण, ज्वरो, रुघाखोकी जस्ता कुरा देखिएको छैन । उनीहरुको अवस्थामा त्यस्तो गम्भीर हुनुपर्ने देखिँदैन ।’
शुक्रबार संक्रमित पहिचान भएको भुल्केमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक जयवेन्द्र यादव परीक्षणका लागि पुगेका थिए । शनिबार उनकै उपस्थितिमा ६९ जनाको स्वाब नमुना संकलन गरिएको थियो । यादवका अनुसार, सोही ६९ जनामध्ये ८ जनाको नमूना पोजेटिभ भेटिएको हो ।
यादवले भने, ‘शनिबार भुल्केमा रहेको मस्जिद वरिपरिको प्रत्येक घरको एकजनाको नमूना संकलन गरिएको हो। तथापि संक्रमितको अवस्था अबको दुई सातापछि देखिने छ ।’
६९ जनामा ९ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र बाँकी ६० जना स्थानीयको स्वाब नमुना संकलन गरिएको हो । सो मस्जिद नेपाली सेनाको क्याम्पबाट पूर्वतर्फ छ । हाल सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमा समेत त्रास देखिएको छ । उदयपुरको सो क्षेत्रबाट ३ सय २० जनाको थ्रोट स्वाब नमूना संकलन गरिएको छ। भुल्के क्षेत्रको आसपास करिब ५२ वटा घरधुरीका करिब ६ सय जनसंख्या छ । सो क्षेत्रलाई सुरक्षा निकायले हाल सिल गरेको छ ।
हाल विराटनगरको कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा १० वटा भेन्टिलेटर बेड सहित ५० वटा बेड क्षमता छ। सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले केन्द्रमा १ सय संक्रमित विरामी राख्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरेको दाबी गरे । भोलिका दिनमा संक्रमितको अवस्था बढ्दै गर्दा धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत वार्ड थप्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री घिमिरे बताए । मन्त्री घिमिरेले भने, ‘वीपीमा १ सय बेड तयार अवस्थामा राख्दै गर्दा थप संक्रमित बढेको खण्डमा अस्पताल नै खाली गराउनेतर्फ सोच भइहेको छ ।’